Wararka - Warbixinta ayaa sidoo kale muujineysa sanadka 2020, maadaama masiibada ka dillaacday wadnaha qeybta, 844,000 Shaqooyinka Safarka & Dalxiiska ayaa lumay dalka oo dhan.
Cilmi-baadhis ay samaysay Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa daaha ka qaaday in dhaqaalaha Masar uu la kulmi karo khasaare maalinle ah oo ka badan EGP 31 milyan haddii uu ku sii jiro liiska socdaalka ee 'casaanka' ee Boqortooyada Midowday.
Iyada oo lagu saleynayo heerarka 2019, heerka Masar ee waddan 'Liiska cas' ee Boqortooyada Midowday wuxuu khatar weyn ku noqon doonaa qaybta safarka iyo dalxiiska ee qaranka ee halganka ku jira iyo guud ahaan dhaqaalaha ayaa ka digaya WTTC.
Marka loo eego tirooyinka cudurka faafa ka hor, booqdayaasha UK waxay matalayeen boqolkiiba shan dhammaan imaatinka caalamiga ah ee soo galay 2019.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay sidoo kale ahayd isha saddexaad ee isha ugu weyn ee Masar, kaliya waxay ka dambeysay Jarmalka iyo Sacuudi Carabiya.
Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarista WTTC waxay muujineysaa in xannibaadaha 'liiska cas' ay ka celinayaan socotada UK inay booqdaan Masar.
WTTC - Dhaqaalaha Masar ayaa wajahaya khasaare maalinle ah oo ka badan EGP 31 milyan taasoo ay ugu wacan tahay Heerka Liiska Cas ee UK
Ururka dalxiiska caalamiga ah ayaa sheegay in tani ay sabab u tahay cabsida laga qabo kharashaadka dheeraadka ah ee ku baxaya karantiil hoteel qaali ah 10 maalmood markii lagu soo noqday Boqortooyada Midowday, iyo tijaabooyin qaali ah oo COVID-19 ah.
Dhaqaalaha Masar waxa uu wajihi karaa biyo-bax ka badan EGP 237 milyan toddobaad kasta, taasoo u dhiganta in ka badan EGP 1 bilyan bishii.
Virginia Messina, Ku-Xigeenka Sare iyo Ku-Simaha Agaasimaha Guud ee WTTC, ayaa tiri: “Maalin kasta Masar waxay ku sii jirtaa liiska cas ee Boqortooyada Midowday, dhaqaalaha waddanku wuxuu wajahayaa malaayiin dad ah kaliya la'aanta booqdayaasha UK oo keliya. Siyaasaddan ayaa ah mid si cajiib ah u xaddidan oo dhaawaceysa maaddaama dadka safarka ah ee Masar ka yimid ay sidoo kale la kulmaan karantiil hoteel oo qasab ah oo qiimo weyn ku fadhiya.
"Go'aanka dawladda UK ee ah in Masar lagu daro 'liiska cas' ayaa saameyn weyn ku leh kaliya maaha dhaqaalaha qaranka, laakiin sidoo kale kumanaan badan oo Masaari ah oo caadi ah oo ku tiirsan waaxda socdaalka iyo dalxiiska ee kobcaya noloshooda.
"Fiditaanka tallaalka Boqortooyada Midowday ee UK ayaa si cajiib ah u guuleystey iyadoo in ka badan afar meelood meel dadka qaangaarka ah ay laba jibaarmeen, iyo 59% wadarta dadweynaha si buuxda loo tallaalay. Suurtagalnimada ayaa ah in qof kasta oo u safraya Masar si buuxda loo tallaalo sidaas darteedna uu keeno khatar yar.
Xogtayadu waxay muujinaysaa sida ay muhiim ugu tahay safarka iyo dalxiisku dalka, iyo sida ay muhiimka ugu tahay dawladda Masar inay sare u qaaddo tallaalka haddii ay doonayso inay hesho fursad ay ku soo kabsato qaybtan muhiimka ah, taas oo aasaas u ah dhaqaalaha dalka. soo kabashada.”
Cilmi-baarista WTTC waxay muujineysaa saameynta weyn ee COVID-19 uu ku yeeshay waaxda Socdaalka & Dalxiiska Masar, iyada oo wax ku biirinteeda GDP-ga qaranka ay hoos uga dhacday EGP 505 (8.8%) sanadka 2019, ilaa EGP kaliya 227.5 bilyan (3.8%) sanadka 2020.